08/09/2016 hasina 10215
Raha nihidy ho an’i Madagasikara ny fandraisam-pitenenana mandritra ny fivoriamben’ny firenena mikambana, tao anatin’ny dimy taona mahery, noho isika voasazy vokatry ny fanonganam-panjakana tamin’ny andron-dRajoelina, dia misokatra midanadana ho antsika izany amin’izao. Porofon’izany, malalaka ny …Tohiny
01/09/2016 hasina 9370
Notorian’ny fikambanana Sherpa teo anatrehan’ny Fitsarana frantsay ny zanaky ny filoha gineana, Teodorin Obiang, noho ireo harembe azony tamin’ny alalan’ny kolikoly sy ny fanodinkodinam-bolam-panjakana izay nividianany trano be maro mitentina an-tapitrisany euros any Frantsa. Harena …Tohiny
Mandray andraikitra. Manoloana ny firongatry ny aretina Pesta amin’izao fotoana, dia nanentana fanadiovana tamin’ny asa tana-maro ny tanora HVM. Nisantarana izany ny teto Antananarivo ka fokontany iray isaka ny boriboritany no nanatanterahana ny hetsika fanadiovana. ...Tohiny